माओवादी प्रचण्ड प्रालिमा सीमित -
माओवादी प्रचण्ड प्रालिमा सीमित
२१ पुष २०७८, बुधबार ०५:०८ Tamakoshi SandeshLeaveaComment on माओवादी प्रचण्ड प्रालिमा सीमित
काठमाडौं । भनिन्छ, पनि देशको मूल नीति नै खराब भइदिँदा सबै नीति खराब हुन्छ । क्रान्तिकारी भनिएका नेताहरू समेत नातावाद, कृपावाद र फरियावादमा रुमल्लिदा हिजोको शासकभन्दा कुनै अर्थमा फरक नदेखिने भए । के एमाले, के माओवादी, के माले यी सबै पार्टी कम्युनिस्ट कम र प्राली बढी देखिन थालेको छ ।
हालै सम्पन्न माओवादीका महाअधिवेशन नै हेरौँ न, माओवादीका केन्द्रीय सदस्यमा प्रचण्डकै घरका चार जना परेका छन् । छोरी, बुहारी, भाइदेखि स्वकीयसम्म एकाघरबाटै परेका छन् । उता ११ जोडी दम्पत्ति नै केन्द्रीय सदस्य बन्दा रसुवा र काभ्रे जिल्ला भने निल हुन पुगेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीमा एकै घरका श्रीमान–श्रीमती नेताहरूको पनि उपस्थिति छ । यस्ता जोडी केन्द्रीय सदस्यमा मन्त्री शशि श्रेष्ठ र उनका श्रीमान् लिलामणी पोखरेल केन्द्रीय सदस्य बनेका छन् । बालावति शर्मा र देवेन्द्र पौडेल केन्द्रीय सदस्य बनेका छन् । देव गुरुङ र यशोधा गुरुङ केन्द्रीय सदस्य बनेका हुन् । अमृता थापा र हितमान शाक्य केन्द्रीय सदस्य बनेका छन् । सत्या पहाडी र शक्ति बस्नेत केन्द्रीय सदस्य बनेका छन् । रेखा शर्मा र कृष्णध्वज खड्का केन्द्रीय सदस्य बनेका हुन् । कमला रोका र गणेशमान पुन केन्द्रीय सदस्य बनेका छन् । ओनसरी घर्ती र वर्षमान पुन केन्द्रीय सदस्य बनेका छन् । ताराकुमारी घर्ती र कुलप्रसाद केसी केन्द्रीय सदस्य बनेका छन् । कल्पना धमला र देवेन्द्र पराजुली केन्द्रीय सदस्य बनेका छन् । सीता पोखरेल र विश्वनाथ साह केन्द्रीय सदस्य बनेका छन् त्यस्तै दिलिप प्रजापति र प्रतिमा श्रेष्ठ केन्द्रीय सदस्य बनेका हुन् ।
यिनै माओवादीहरू महाधिवेशन कस्तो हुन्छ एमालेलाई हामी देखाउँछौँ भन्थे । अहिले गोजीबाटै नाम निकालेर देखाए प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट । ओलीकै शैलीमा प्रचण्डले पनि आफूले आफूलाई केन्द्रीय सदस्य र अध्यक्ष बनाए । भाइ नारायण दाहाल, छोरी रेनु दाहाल र बुहारी विना मगर (दाहाल) लाई केन्द्रीय सदस्य बनाइ छाडे । र माओवादी भनेको प्रचण्ड एण्ड कम्पनीजस्तो देखियो । यसअघि पनि उनले बुहारी विनालाई खानेपानी मन्त्री बनाएकै हुन् । त्यसबेला खानेपानी तथा सरसफाइ विभाग प्रमुखबाट देवेन्द्र पौडेलको नाममा टिपेक्स लगाउन भ्याएकै थिए ।
अवसर पाउँदा प्रचण्डले छोरी, ज्वाइँ, बुहारी सबैलाई उच्च सरकारी पदमा पु¥याएका छन् । भाइ नारायण दाहाल, ज्वाइँ जीवन आचार्य अहिले पनि उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको विशेष सल्लाहकारको नियुक्ति पाए । प्रचण्डका ज्वाइँ तथा प्रचण्डपुत्री रेनुका श्रीमान् अर्जुन पाठक सरकारी सुविधासहित आफ्नै श्रीमती तथा भरतपुर महानगरकी मेयर रेनुको विशेष सल्लाहकार छँदैछन् । प्रचण्डका बहिनी ज्वाइँ खेम भण्डारी भरतपुर अस्पतालको अध्यक्षमा । प्रचण्डलाई काका सम्बोधन गर्ने महेश दाहाल अस्ट्रेलियाको राजदूत थिए । राजदूत फिर्ता हुँदा तानिए, फेरि राजदूत बनाउने चलखेल चल्दैछ ।
ओली सत्तामा हुँदा झापालीजति भेट्यो कि नियुक्ति भेटिहाल्थे । त्यतिबेला ति कांग्रेसी हुन् कि पञ्च केही हेरिएको थिएन । युवराज खतिवडाले सातपटक लाभको पद भेटे । अग्नि खरेल सांसद, मन्त्री हुँदै महान्यायधिवक्ताका लागि योग्य भए । हिक्मत कार्की, शिवमाया तुम्वाहाम्फे मन्त्री बनाइए । झापाली भएकै नाताले कुमार रेग्मी न्यायालयमा पुगे । उनको दाई माधव रेग्मी कट्टर कांग्रेस भएर पनि लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष बनाइए । माले पार्टीको के कुरा गर्नु ? अब त्यो पार्टीमा सिपीका नातेदारबाहेक कोही बाँकी छैनन् । खत्रा कम्युनिस्ट नेता भनिएका मोहनविक्रम सिंहसमेत पत्नीको मोहमा परेका छन् । आठ दशक उमेर नाघेका, दाह्री कपाल सेताम्य भइसकेका उनी उमेरले आफूभन्दा ३७ वर्ष कान्छी पत्नी दुर्गा पौडेलको मायामा परेका छन् । कहिले उपसभामुख त पत्नीलाई कहिले मन्त्री बनाउन कम्मर कस्सेर लाग्छन्, यद्यपि सफल हुन सकेका छैनन् ।
सरकार सञ्चालक ठेकेदार र व्यापारी !
शिक्षामा व्यापार अमान्य
इराकमा पूर्व विद्यार्थीद्वारा प्राध्यापकको हत्या
१५ असार २०७९, बुधबार ०५:५४ Tamakoshi Sandesh
३ जेष्ठ २०७९, मंगलवार ०९:४३ Tamakoshi Sandesh
जनताले ठाडो अस्वीकार गरे परिवारवादलाई
४ जेष्ठ २०७९, बुधबार ०३:४१ Tamakoshi Sandesh